Fihibohana henjana ho an’ny faran’ny herinandro tao Azerbaidjana, taorian’ny fitomboan’ny tranga COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Mety mbola tsy ho farany ity fihibohana faran'ny herinandro ity
Voadika ny 19 Jona 2020 17:06 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, Français, عربي, English
Ny fihaonan-dàlana Istiqlaliyyet sy Nigar Refibeyli ao anatin'i Bakou (renivohitr'i Azerbaidjana) mangadihady. Sary an'i Akbar Mammadov, nahazoana alàlana.
Ny 8 Jona 2020 no nivoahan'ny lahatsoratra anglisy voalohany.
[Raha tsy misy fanamarihana manokana dia mankany aminà lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.]
Nihidy an-trano ry zareo Azéris nandritra ny faran'ny herinandro 6-7 Jona.
Ny 3 Jona, mba hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19 dia nambaran'ny manampahefana ny fepetra faran'izay henjana indrindra nisy hatreto tao amin'ny firenena : fihibohana mandritra ny faran'ny herinandro. Nanomboka ny misasakalin'ny Zoma hatramin'ny Alatsinainy maraina tamin'ny 6 ora, noraràna tsy nahazo hivoaka ny trano ny vahoaka.
Ny 28 Febroary i Azerbaidjana no nanamafy ny fisian'ny tranga voalohany tao aminy, ary ny 24 Martsa no nametraka rafitra iray fanokanamonina manokana. Araka ny sarintanin'ny Oniversite John Hopkins, hatreto dia tranga COVID-19 miisa 7.553 no voamarina ao an-toerana, ary 88 no namoy ny ainy [Fanavaozana : tranga 10 662 no voamarina, ary 126 no namoy ny ainy tamin'ny 17 Jona 2020]. Saingy hatramin'ny namahàna ireo fepetra henjana nanditra ireo herinandro teo aloha, toa mitombo indray ankehitriny ireo tranga vaovao.
Tamin'ny 4 Jona, nambaran'ny Praiminisitra Ali Hasanov ny fisian'ny fepetra fihibohana, mifandray amin'ny fitomboan'ny tahan'ireo tratry ny valanaretina. Ny 3 Jona, haavo tsy mbola nisy toy izany no hita, 325 ireo tranga COVID-19 vaovao tao amin'ny firenena, ka 5 no maty, ary izany no nanosika ho amin'ny fametrahana tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina nandritra ny faran'ny herinandro. Nampiharina tao Bakou, renivohitra io fepetra farany io, sy tany amin'ireo distrikan'i Sumqayit, Gandja, Lankaran et Abşeron, ary mety hotazonina mandritra ny volana roa arakaraky ny fivoaran'ny valanaretina.
Tamin'ny 4 Jona, Ramin Bayramli, lehiben'ny sampandraharaha misahana ny Fahasalamam-bahoaka, nandritra ny famelabelarany ireo torolàlana nanoloana ny vondrona manokana natsangana hiatrika ny coronavirus, no nanolotra hevitra hametrahana ilay tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Nandritra ny fivoriana iray nataon'ny kabinetran'ny ministera, nilaza izy fa noraisina izao fanapahankevitra izao « noho ny zavamisy hoe tsy ela akory izao, efa mihoatra ny 200 ireo trangana coronavirus voavao voaisa isanandro ».
Ny 18 May teo, nohalefahana ny fepetra fihibohana tao amin'ny firenena. Talohan'io, mba ho afaka mivoaka ny tranony dia tsy maintsy naka fahazoandalàna tamin'ny alàlan'ny SMS ireo mponina (fepetra efa napetraka nanomboka ny 4 Aprily), ary narahana fepetra koa ny fahafahana mamonjy ireo kianja, lalambe, tranombakoka, fampirantiana sy toerana hafa fialàna voly.
Vakio koa : Tsy maintsy mandefa SMS ry zareo Azéris alohan'ny hivoahany ny trano [fr]
Ny 31 May, nohalavain'i Azerbaidjana ho hatramin'ny 15 Jona anefa ny fihibohana, niara-dàlana tamin'ny fanalefahana ireo fepetran'ny fanokanamonina. Isan'ireto fepetra farany ireto ny fanokafana ireo toerampivarotana goavana (afa-tsy ireo toerana fitaizana ankizikely sy ny toerana fialàna voly, ny fijerena sarimihetsika sy ny toerana fisotroana kafe ho an'ny daholobe), kafe, toerana fisakafoanana ary ireo fifaninànana ara-panatanjahantena ivelan'ny trano. Niakatra be tsy nisy toy izany ny isan'ireo trangana COVID-19.
Raha heverina fa henjana be ilay rafitra fandefasana SMS, mbola henjana kokoa noho izay ilay fihibohana mandritra ny faran'ny herinandro. Ireo fepetra vaovao dia mandràra tanteraka ny mponina tsy hivoaka ny tranony, raha tsy noho ny resaka vonjy aina na fahasalamàna irery ihany. Azo atao ihany koa ny mamonjy fandevenana havana fa maka fahazoandàlana amin'ny laharana #102, izay ny sampandraharaha mpiandry raharaha ao amin'ny ministeran'ny atitany no misahana azy.
Nambara ihany ko fa hikatona ireo farmasia sy magazay mandritra ny roa herinandro hisian'ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Niteraka fisavoritahana sy firohotana namonjy magazay izany tamin'ny 5 Jona teo.
Natsahatra daholo ihany koa ireo fitaterana rehetra iraisan'ny daholobe, ary noraràna ireo fiaran'olontsotra. Ny sazy ara-bola noferan'ny governemanta dia tafakatra 58 hatramin'ny 2.941 dolara amerikàna raha tratra mampiasa fitaterana manokana, na inona na inona karazany, mandritra ny faran'ny herinandro natao hihibohana, arahana sazy fanampiny ho an'ireo mpiasampanjakana mitana toerana ambony. Amin'ny tranga sasantsasany, mety haiditra am-ponja mandritra ny volana iray ireo tsy manaja fepetra.
Ny 5 Jona, Ehsan Zahidov, mpifandray amin'ny gazety ao amin'ny ministeran'ny atitany, dia nanambara [az] fa tsy ho azon'ireo mponina atao akory aza ny mamoaka ny fitoerampakon'izy ireo mandritra ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Nampitandrina ireo tsy manajà fepetra izy fa 58 dolara no sazy ara-bola mety ho azo amin'izany (100 AZN).
Misy vitsivitsy tsy iharan'ireo fepetra ireo anefa. Misy lisitra ahitàna masoivohom-panjakana sy andrim-panjakana vitsivitsy navoakan'ny kabinetran'ny ministera, izay mahazo alàlana ny mpiasa amin'izy ireny hivoaka mandritra ny fotoana fihibohana, saingy rehefa nahafeno fotsiny ihany ireo fepetra fanaovana sonia elektronika ao amin'ny tranonkala allow.e-gov.az. Na misy aza io fanomezandàlana manokana io, tsy maintsy apetraky ny mpampiasa ny fisiana fitaterana voarindra, ny fampiasàna ireo fiara manokana dia mbola mitoetra hatrany ho tsy azo atao.
Kamran Aliyev, tale jeneralin'ny polisy ao Bakou, dia nanambara [az] tamin'ireo media ao an-toerana fa ireo olona manana fahazoandalana hiasa dia afaka mamonjy ny biraony amin'ny fampiasàna bisikilety na an-tongotra raha toa ka tsy lavitra ny toerana fonenany.
Tamin'ny 31 May lasa teo, nolanian'ny antenimiera ny lalàna iray mametraka ny tsy maintsy hitondràna arontava eny amin'ny toerana ifaneraseran'ny daholobe nanomboka tamin'ny 3 Jona. Ireo rehetra tsy manaja io fepetra vaovao io dia hiharan'ny sazy ara-bola 29 hatramin'ny 235 dolara amerikàna. Amporisihan'ny lalàna ny rehetra mba hanaja ny elanelana sôsialy 1,5 hatramin'ny 2 metatra eny amin'ny toerana rehetra natao ho an'ny daholobe.
Ny 4 Jona, nanambara ny orinasa nasiônaly misahana ny fitaterana an'habakabaka, Azerbaijan Airlines (AZAL), fa hikatona daholo ireo seranampiaramanidina rehetra hatramin'ny 01 Jolay. Natsahatr'i Azerbaidjana daholo ny sidina nanomboka tamin'ny tapany faharoan'ny volana Martsa.